यहूदी बस्तीमा, विश्वव्यापी चर्च अफ गड स्विजरल्याण्ड (WKG)
"अनि एउटाले भन्नेछ," यो देश उजाड भएको, अदनको बगैंचा जस्तो भएको छ, र उजाड र भग्नावशेष र भत्किएका शहरहरू सुदृढ र बसोबास गरिएको छ " (इजकिएल :36 35:।)
कन्फर्मेसनको लागि समय - म त्यो पुस्ताको हुँ जो एल्भिस प्रेस्लेको प्रतिभाको कदर गर्न सिकेको थिएँ। आज, त्यतिबेलाजस्तो, मलाई उनका सबै गीतहरू मन परेन, तर त्यहाँ एउटा गीत छ जसले मलाई विशेष प्रभाव पार्दछ र त्यो दशकौंको अवधिमा मसँग सकारात्मक रूपमा गुन्जेल छ। आज यो सत्य छ जस्तो यो लेखिएको थियो। यो म्याक डेभिसले १ s० को दशकमा लेखेका थिए र पछि धेरै कलाकारहरूले रेकर्ड गरेका थिए। यसलाई "इन गेटी" भनिन्छ र संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा छेउमा जन्मेको बच्चाको कथा भन्छ, तर यो विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुन सक्थ्यो। यो एक शत्रुतापूर्ण वातावरणमा उपेक्षित बच्चाको बाँच्नको लागि संघर्षको बारेमा हो। बच्चा एक जवान, हिंस्रक मानिसको रूपमा मारिन्छ र उहि समयमा अर्को बच्चाको जन्म हुन्छ - त्यो बस्तीमा। डेभिसले पहिलो पटक गीत "बुभेल सर्कल" भन्ने नाम लिए, एक शीर्षक जुन वास्तवमै राम्रोसँग फिट हुन्छ। गरीबी र उपेक्षामा जन्मेका धेरैको जीवन चक्र प्रायः हिंसाले समाप्त हुन्छ।
हामीले डरलाग्दो कठिनाइको साथ संसार सिर्जना गरेका छौं। येशू यहूदीहरूको छेउछाउ र दुःखकष्टको अन्त गर्न आउनुभयो। यूहन्ना १०:१० भन्छ, “चोर चोरी, हत्या र नाश गर्न मात्र आउँदछ। म आएँ ताकि तिनीहरू जीवन पाउन र यसलाई प्रशस्त मात्रामा पाउन सकून्। ”चोरहरूले हामीबाट चोरी गर्छन् - तिनीहरूले जीवनको गुणस्तर हरण गर्दछन्, मानिसहरूलाई स्वामित्व सहित सम्पत्तीबाट वञ्चित गर्छन्। शैतानलाई विनाशकर्ताका रूपमा चिनिन्छ र उहाँ यस संसारको छेउमा जिम्मेवार हुनुहुन्छ। यर्मिया:: ““ सिंह आफ्नो ओडारबाट उठ्छ, र जाति-जातिलाई नष्ट गर्ने आउँछ। तपाईंको देशबाट उजाडस्थानमा परिणत गर्न उहाँ आफ्नो ठाउँबाट सर्नुहुन्छ, तपाईंको शहरहरू भत्किएका छन्, त्यहाँका बासिन्दाहरू छैनन्। ”शैतानको विनाशको कारण तिनीहरूको उपस्थितिमा भएका सबै पापहरू हुन्।
तथापि, सबै कुरा यो हो कि त्यो उसले हाम्रो सहमतिले गरेको हो। सुरुदेखि नै हामीले आफ्नै तरिका छनौट गर्यौं किनकि यो उत्पत्ति :1:१२ मा यसो भनिएको छ: “अनि परमेश्वरले पृथ्वीलाई हेर्नुभयो र हेर्नुभयो; किनकि सबै मानव शरीरले आफ्नो जीवनलाई बिगार्‍न सकेको थियो। "हामी यस मार्गमा लागिरहन्छौं र हाम्रो जीवनमा पापको छेउहरू बनाउँछौं। रोमी :6:२ us ले हामीलाई भन्छ: "किनकि सबैले पाप गरेका छन र परमेश्वरको महिमा प्राप्त गर्दैनन्" हामी हामीलाई भन्दा उत्तम मार्ग देखाउने व्यक्तिबाट टाढा हटेका छौं। (१ कोरिन्थी १:1:१२)।
त्यो दिन आउनेछ जब त्यहाँ कुनै छेउछाउ हुनेछैन। युवाहरूको हिंस्रक मृत्युको अन्त्य हुन्छ र आमाहरूका रुवाइ रोकिन्छ। येशू ख्रीष्ट मानिसहरुबाट आफैंलाई बचाउन आउनुहुनेछ। प्रकाश २१: us ले हामीलाई प्रोत्साहित गर्छ र भन्छ, "उसले उसको आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनेछ, र मृत्यु हुनेछैन, न त फेरि शोक, रुवाइ वा पीडा नै हुनेछ; किनकि पहिलो बितिसक्यो। ”प्रकाश २१:, मा पढ्दै जाँदा येशूले सबै कुरा नयाँ बनाउनुहुनेछ।“ र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले यसो भन्नुभयो: “हेर, मँ सबै नयाँ बनाउँछु। अनि ऊ भन्छ: “लेख! किनभने यी शब्दहरू निश्चित र सत्य छन्। "यी यहूदीहरू अनन्तसम्म मेटिनेछन् - कुनै पनि कुटिल चक्र! यो दिन तुरुन्त आउन सक्छ!
अद्भुत परोपकारी ईश्वर, हामी आफैले आफैलाई बचाईएको उद्धारको योजनाको लागि धन्यबाद। हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, प्रभु हामीसँग दरिद्रहरूको लागि अनुकम्पा छ। तपाईंको राज्य आयो। आमेन।
इरेन विल्सन द्वारा